Izilimi - AfricArXiv
Cishe kukhulunywa cishe izilimi ezingama-2000 e-Afrika. ISenegal, iNigeria neKenya batyala imali ekukhuphuleni nasekuthuthukiseni izilimi zabomdabu. Amandla anjalo okusatshalaliswa kolwazi ahlala engatholakali umphakathi wokucwaninga wesayensi e-Afrika okwamanje. Sicabanga ukuthi abantu abaningi bangahle bathambekele ekwabelaneni ngolwazi uma benethuba lokukwenza ngezilimi zabo zenkobe.
Ukufingqa ngesiNgisi nangesiFulentshi
Sicela unikeze isifinyezo esifushane ngesiFulentshi / isiNgisi kanye nesiqalo sokuvala izikhala zolimi phakathi kwe-francophone ne-anglophone Africa.
Ukuhumusha kungazenzakalelayo ngokusebenzisa ukuhumusha nge-Google or DeepL - kulokho icala sicela ungeze inothi, njengokuthi "Kuhunyushwe ngokuzenzakalela nge- [Google Translate / DeepL]".
I-KiaArxiv ingasetshenziselwa ukuphathwa kwamaphrojekthi ngolimi lwendawo (namazwana aqoqiwe) ukuze lo mbhalo wesandla ungeniswe endaweni egciniwe ekhethekile ngesiNgisi.
Sikhuthaza ukuhanjiswa ngezilimi ezivame ukusetshenziswa ngumphakathi wesayensi ezweni elithile, njengesiNgisi, isiFulentshi, isiSwahili, isiNgisi, isiBhulu, isi-Igbo, isi-Akan, noma ezinye izilimi zomdabu zase-Afrika. Imibhalo yesandla ethunyelwe ngezilimi ezingewona amaNgisi izobanjwa emgqeni wokumodela kuze kube yilapho sesiqinisekisa ukuthi iqinisekisiwe. Sikukhuthaza ngalokhu ukuthi uphakamise abantu abangasiza ekuphatheni ngolimi lwakho.
Ukuhunyushwa kwemibhalo yesandla
Ngaphambi kokuthi uqale uthinte abalobi bencwadi yasekuqaleni ngemvume yabo yangaphambili nangolwazi.
Isihloko esikhulu kufanele kube isihloko esihunyushiwe; okukhombisa ukuthi lokhu ukuhunyushwa kombhalo wesandla osuvele ukhona (isb. [SW> EN] kulandelwa isihloko esihunyushiwe sokuhumusha kusuka esiSwahili kuya esiNgisini). Faka isihloko solimi lwangempela njengesihlokwana ukwenza ukuhumusha kutholakale. Isixhumanisi sedokhumenti yolimi lokuqala nesitatimende esicacile sokuhumusha kufanele sifakwe ekhasini lokuqala.
Faka imethadatha eyengeziwe nefanele.
Izilimi zase-Afrika kuwebhusayithi yethu
Ubonile ukuthi ungashintsha ulimi lwewebhusayithi yethu lube olimini lwesiHausa, isiSwahili, isiXhosa noma isi-Amaranth phakathi kwezinye izilimi ezikhulunywa ezwekazini?
Iwebhusayithi ye -AfricaArXiv ihunyushwe ngokuzenzakalela yi I-GTranslate.io nge-plugin ye-wp kusuka esiNgisini iye ezilimini eziyi-19. Ukuhumusha kuhle kepha akuphelele yingakho…. Sifuna amavolontiya asisize sithuthukise imibhalo ehunyushiwe kwiwebhusayithi yethu. Ukuze ubambe iqhaza kulo mzamo womphakathi sicela uthumele i-imeyili kuwo kenya@africarxiv.org.
Njengamanje, sinikeza okuqukethwe kwethu ngezilimi ezilandelayo:
Malagasy Portuguese Sesotho waseSomali Sunda
Sithumele i-imeyili ukusiza ukuhumusha noma yiziphi izimemezelo ezifakwe kuhlu ezingezansi nezinhlelo ezihambelana nokwehluka kanye nokufakwa emfundweni ephakeme, ucwaningo kanye nokushicilelwa kwezezifundo:
. Cabanga Bheka Hambisa
. IHelsinki Initiative